Dagaal ay ka qeyb qaateen diyaarado oo ka dhacay duleedka Kismaayo – Radio Muqdisho
Dagaal ay ka qeyb qaateen diyaarado oo ka dhacay duleedka Kismaayo
Dagaal ay ka qeyb galeen diyaaradaha qumaatiga u kaca ayaa ka dhacay tuulo ku dhow magaalada Kismaayo oo ay xarun ku laheeyeen maleeshiyaadka Al-Shabaab.
Wararka laga helayo tuulada Yoontaay oo 15km u jirta magaalada Kismaayo ayaa sheegaya in fadhiisin ay lahaayeen kooxda Al-Shabaab ay weerareen diyaarado ah nooca qumaatiga u kaca oo aan la ogeyn cidda iska leh. Maleeshiyaadka ayaa iska caabbin sameeyay ayadoo ku dhawaad hal saac uu dagaalku socday sida ay sheegtay BBC.
Lama oga khasaaraha ka dhashay dagaalkaas oo ahaa mid bartilmaameed lahaa. Dadka degaanka ayaa sheegay in diyaaradihii ay ku laabteen dhinaca magaalada Kismaayo.
Duqeyntii ugu dmabeysay ee lala beegsado Al-Shabaab ayaa toddobaadkii la soo dhaafay ka dhacday qeybo ka mid ah gobolka Baay, haalkaas oo ay ku shirsanaayeen horjoogeyaal ka tirsan kooxda Al-Shabaab.
Darren Fletcher oo Ugu Danbeyn Ku Biiray Kooxda West Bromwich Albion
Sheekh Caan ah oo lagu dilay Masjid ku yaalla magaalada Beydhabo